10 Cities Romantic Si Booqo In Germany | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Cities Romantic Si Booqo In Germany
Waqtiga Akhriska: 5 daqiiqo(Last Updated On: 20/12/2019)
Europe waa iyadaa ugu fiican waayo, ku cararaan magaalada taataabtay. Si kastaba ha ahaatee, waa meel weyn, oo laga yaabo in aad rabto in aad hoos u soo koobto. Nasiib wanaag, waxaa jira waxyaabo badan oo aad jeceshahay oo ku saabsan Germany, gaar ahaan ay magaalooyinka jaceyl iyo magaalooyinkeedii. Waa maxay sababta aan qaato qofka aad jeceshahay safar aysan waligoodna ilaawi doono? Si lagaaga caawiyo go'aan meel ay aadaan, halkan waa 10 magaalooyinka ka taataabtay in ay booqdaan in Germany:
City A Romantic: Rothenburg umuliya der Tauber
Rothenburg waa u horeeya liiska of Cities Romantic Si Booqo In Germany, Waxaa magaalada ekayd kaamil ah oo soo jiidata malaayiin visitors sannad kasta. Si kastaba ha ahaatee, marka aad booqato, aad arki doonaa sababta ay sidaas oo caan ah. Aasaasay ee Musefeni, Waxyoon sawirka ah ee xad-dhaaf ah sawir iyo movies, Rothenburg waa magaalo iyo magaalo Romantic aan idin illoobi doona.
City A Romantic: Bamberg
Bamberg waa magaalada Jarmal toddoba hills, badan sida Rome ee Italy. Iyo sida Rome, magaaladan jaceyl waxaa ka buuxa qurux badan naqshadaha taariikhi ah iyo views in aad xaaqin cagihiinna ka dhabaandhaba doonaa. Waa maxay more, Bamberg wuxu iska leeyahay degmada "Little Venice", oo waxay bixisaa fursad uu ku qaadan kortaan gondola a.
Nuremberg in Tareenadu Bamberg
Frankfurt inay Tareenadu Bamberg
Stuttgart in Tareenadu Bamberg
Dresden in Tareenadu Bamberg
City A Romantic In Germany: Monschau
U dhow magaalada Aachen, Monschau oo dhan uu leeyahay: views picturesque, a fuuli, webi, iyo a qalcaddii haybad, iyo hindiga. Waa maxay waxa ay taasi ka Cities Romantic kaamil Si Booqo In caga Germany, waayo, kuwii ku caashaqi jiray dabiiciga ah waa ay faro badan oo ah wadooyinka hortayada buuraha. Intaas waxaa sii dheer, haddii aad booqo ee xilliga qaboobaha, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysan noqon doonaa in ay suuqa Christmas dhaqanka.
Meissen fadhiya webiga Elbe ah, waana magaalada ugu da'da weyn oo dhan Saxony iyo City A Romantic. dooxada Elbe waa waxa yaridda Meissen sida racfaan ka taataabtay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wax dheeraad ah si aad u aragto, sida saqafyada cas ay u qurux badan in ay yihiin garabaka Prague. Intaas waxaa sii dheer, iyo kuwo naqshadaha ku raaxaysan karaan sahaminta ah cathedral Gothic haybad leh qalcaddii ah qarnigii 16aad.
Berlin si Tareenadu Meissen
Freiberg in Tareenadu Meissen
Cottbus in Tareenadu Meissen
Chemnitz in Tareenadu Meissen
Cities Romantic Big Si Booqo In Germany: Heidelberg
Heidelberg waa meel ku fiican haddii aad rabto in aad dareento in ruuxa nasjonalromantiske oo wuxuu ku raaxaysan soo jiidashada ee magaaladan. Waa maxay more, aad sahamin karaan burbur ah qalcaddii on buuraha lahaa, oo waxay qaadan cabbayso webiga Neckar la mid aad jeceshahay.
Cities Romantic Si Booqo In Germany – Freiburg
Haddii aad raadinayso markii qoraxdu marka raadinaya Cities Romantic Si Booqo In Germany, eegi jirin dheeraad ah ka badan Freiburg, qarkii ee caanka ah Black Forest. dhow in soohdinta reer Switzerland, waxaad filan kartaa views qurux badan iyo durdurrada cajiib ah oo magaalada dibaddeeda ah. Freiburg waa qumman yahay in ay soo booqdaan sannadka oo dhan.
biyaha Sea-buluuga ah ee Lake Bodensee iyo Alps hareereeya Lindau. Halkan waxa aad ku raaxaysan karaan aragtida cajiib ah, iyo sidoo kale ciyaaraha biyo kala duwan iyo safarada doon, iyo qaar ka mid ah Romance. Intaas waxaa sii dheer, Lindau waa quruxda badan ee jiilaalka, gaar ahaan marka Bodensee ka fariisiyo.
Konstanz in Tareenadu Lindau
Memmingen in Tareenadu Lindau
Biberach in Tareenadu Lindau
Ulm in Tareenadu Lindau
Trier waa magaalada ugu da'da weyn Germany, Waa on liiska magaalooyinka Romantic Si Booqo In Germany, laakiin si aad u ogaato waxa aad u dhow in Luxembourg, isagoo on bangiyada taagnaa Moselle webiga muddo ka badan laba kun oo sano. Si aad u muujiso quruxdiisa, Trier faanaa naqshadaha Roman, iyo sidoo kale dhismayaasha Dr Makumbe oo Gothic. In si kale loo dhigo, boorish this gaar ah ka dhigaysa Trier yaab run.
Koblenz in Tareenadu Trier
Frankfurt inay Tareenadu Trier
Mainz in Tareenadu Trier
Stuttgart in Tareenadu Trier
City A Romantic magacaabay: Cochem
Haddii aad u socotid on safar webiga ee Germany ah, hubi in aad ka mid ah Cochem sida mid ka mid ah joogsiyada. canab ah and a breathtaking 11th century castle are the main features of this river town and a very romantic city.
Frankfurt inay Cochem Tareenadu
Bonn in Cochem Tareenadu
Cologne si Cochem Tareenadu
Stuttgart in Cochem Tareenadu
Cities Romantic Last Si Booqo In Germany – Quedlinburg
yar Tani magaalada Dr Makumbe sidoo kale waxaa lagu tirin karaa liiska Romantic Cities Si Booqo In Germany, magaaladan aad neefsado doonaa marti ay jiidasho jidadka ka samysan iyo guryo quaint. Intaas waxaa sii dheer, taariikhda ku caashaqa oo ku raaxaysan doonaa sahaminta ay taariikh u gaar ah. Sida meesha nasasiiyay of King Heinrich aan, Quedlinburg waa magaalo muhiim ah.
Magdeburg in Tareenadu Quedlinburg
Bielefeld in Tareenadu Quedlinburg
Ma waxaad go'aansatay oo Cities in Booqo ee Germany Romantic aad rabto in aad soo qaado sida aad ku cararaan soo socda? Qorshee safar mid ka mid ah 10 ugu magaalo ka taataabtay ee Germany iyo Ballansan Your Tigidhada in Tareenku waqtiga la Save A tareenka!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “10 Cities Romantic Si Booqo In Germany” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fromantic-cities-visit-germany%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#germanytravel europetravel eurotrip taataabtay romanticdestinations trainjourney caarada tababarka tareen safarka